1aviagem.com -22 पृष्ठ - सुझावहरू, साक्षात्कारहरू, कथाहरू पहिलो पटक शौकियाले बताए
ब्राजिलका चुनावहरूमा मैले के गर्नुपर्छ?
म राजनीति को यो शाखा मा नहीं जाऊँगा तर ब्राजीलियन को लागी मलाई ऐसा गर्न मजबूर लाग्यो। शायद ढिलाइ, तर सँधै भन्दा ढिलो। मैले यहाँ चुनावको लागि मतदाताको लागि 8 सुझावहरू छुटेको छु। यसलाई काम गर्नुहोस्! 1- जानकारी जाँच्नुहोस्: कुराकानी शुरू गर्न, जानकारी जाँच गर्नु अघि ...
थप पढ्नुहोस् ब्राजिलका चुनावहरूमा मैले के गर्नुपर्छ?
पैसा कसरी यात्रा गर्ने छ?
खैर, यो विषयवस्तु वास्तवमा मेगा-सेना, कमल र अन्य लोट्टेको बारेमा साथीहरूको बीच कुराकानी पछि आए। प्रश्न थियो: यदि तपाईंले 1 मिलियन पुन: कमाउनु भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? र कुराकानी बीचको बीचमा मैले देखेको थिएँ कि मेरो लागि धेरै सामान्य छ र धेरै मानिसहरूको लागि होइन ...
थप पढ्नुहोस् पैसा कसरी यात्रा गर्ने छ?
क्यानाडा - कसरी नियागारा फल्सको बारेमा?
आज हामी नियाग्रा फल्स भ्रमण गर्नेछौं। टोरोन्टो छोडेर तपाईंले रेलमार्फत नियाग्रा फल्स आराम गर्न सक्नुहुनेछ। यो रेल को लागी एक दुई घन्टा को ड्राइव मा छ। $ 24,86 CAN (क्यानाडाली डलर) को लागतमा। अर्थव्यवस्था वर्गमा जुन तरिकाले राम्रो छ। रेलमा भान्सा, वाईफाई, बाथरूम र ...
थप पढ्नुहोस् क्यानाडा - कसरी नियागारा फल्सको बारेमा?
अमेरिकाको पहिलो भ्रमण - न्यूयर्क।
त्यसोभए, हामी कसरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्छौं? देश जहाँ बाट फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र पछिल्लो राष्ट्रपतिको महान सामाजिक सञ्जालहरु धेरै विवादास्पद बयान गर्दछ! तर यो सम्झनाको लायक छ कि देश मा मार्टिन लुथर राजा जस्तो नस्लवाद विरुद्ध लडाइमा धेरै अवरोध थियो ...
थप पढ्नुहोस् अमेरिकाको पहिलो भ्रमण - न्यूयर्क।
मास्को मेट्रोको प्रयोग गरेर रूसी कपबाट कसरी प्राप्त गर्ने?
आज रूस (2018) मा विश्व कप फाइनलको दिन हो, र धेरै टोलीहरू घर फर्किसकेको छ। सम्भवतः सबै भन्दा एयरपोर्टमा बस्यो। तर पर्यटकहरूको लागि, तथापि, यो मेट्रो लिन लायक नभएसम्म मस्को मास्को मा बिदाई बिदा गर्नु अघि अर्को हिड्न ...
थप पढ्नुहोस् मास्को मेट्रोको प्रयोग गरेर रूसी कपबाट कसरी प्राप्त गर्ने?
ब्राजील, रियो डी जनेरियो को बारे मा सुझाव
ब्राजिलको टिमको घर फर्केर हेर्दा ब्राजिलको सानो कुरालाई कसरी थाहा छ? त्यसैले आज हामी अद्भुत शहर, पुरानो ब्राजीलिया राजधानी, टम अय्यूब, विनिसीस डे मोरास, चिको बिराक, टोक्विनो (यो पिसिस्टा छ, पाठक, आरआरएसएन रेनोटो) र धेरै अन्य सहयोगको लागि धन्यवाद देख्दै हुनुहुन्छ। जहाँ माइकल जैक्सन, जेम्स ...
थप पढ्नुहोस् ब्राजील, रियो डी जनेरियो को बारे मा सुझाव
कोलम्बियाको बारेमा के कुरा, हामी के गर्न सक्छौं?
र कोलम्बिया हाम्रो पहिलो यात्रा कसरी थियो? हामी तपाईंलाई सल्लाह, खोज र ईतिहासको साथ भरोसा दिन्छौं! हामी कार्टेजेनामा गयो देशको बारेमा थोरै जाँच गर्न। हाम्रो साथ अनुसरण गर्नुहोस्। के enchants? सिउदाद अमुरलाडा (वाल्ड शहर वा वाल्ड सिटी) र ऐतिहासिक केन्द्र - म पैदल हिंड्न सिफारिस गर्दछु, सडकहरू साँघुरो छन्, भएको…
थप पढ्नुहोस् कोलम्बियाको बारेमा के कुरा, हामी के गर्न सक्छौं?
STOPOVER यो कस्तो छ र कसरी? हो, तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैलाई नमस्कार, यो धेरै छिटो पोष्ट हुनुपर्दछ। यसमा हामी STOPOVER को बारेमा कुरा गर्ने छौं! (त्यो के हो?) स्टपओभर, लामो उडानहरू बीचको सम्बन्ध बाहेक अरू केहि पनि हुँदैन, बच्चाहरूमा परिवर्तन हुनु भनेको त्यस्तो स्थान हो जहाँबाट ठाउँ जान्नको लागि रोक्न र उहि उडानमा जारी राख्न सम्भव छ। यो अंग्रेजीबाट आएको छ: "स्टप ओभर" ...
थप पढ्नुहोस् STOPOVER यो कस्तो छ र कसरी? हो, तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
पैराचुट जम्प यो के हो?
थप पढ्नुहोस् पैराचुट जम्प यो के हो?
कम्बोडिया: सुझाव, मंदिर, कथाहरू र मूल्यहरू
त्यसपछि यो कम्बोडिया, यो सरल, कुशल र धेरै अनुकूल देशको भ्रमण गर्न समय थियो। सुरूबाट देशले पहिले नै मलाई नवाचार र क्षमताको लागि जितेको छ! के? तर कम्बोडिया एक कमजोर, अव्यवस्थित देश होइन? मलाई पछ्याउनुहोस् र हेर्नुहोस् कि अन्त्यमा तपाई अझै पनि त्यहि दर्शन राख्नुहुन्छ। सुझाव: अभिनव: कम्बोडिया, ...
थप पढ्नुहोस् कम्बोडिया: सुझाव, मंदिर, कथाहरू र मूल्यहरू